प्रधानमन्त्री र सांसदले बोलेका असंसदीय शब्द सभामुखद्वारा हटाउन लगाइयो ! - PUBLICAAWAJ
प्रधानमन्त्री र सांसदले बोलेका असंसदीय शब्द सभामुखद्वारा हटाउन लगाइयो !
प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख २७, २०७६१२:२३ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बोलेका संसदीय मर्यादाविपरीतका शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
सभामुख महराले प्रधानमन्त्री र सांसदहरूले प्रयोग गरेका अनुकूल नभएका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टिकरण तथा माननीय सदस्यको जिज्ञासाको क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्छु । ‘
सभामुखको निर्देशन पश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समर्थनमा टेबल ठटाए । साथै यसै क्रममा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खगराज अधिकारीले भने सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने क्रममा प्रयोग गरेका संसदीय मर्यादा अनुकूलका शब्द पनि हटाउनु पर्ने माग गरे ।
अधिकारीको माग पश्चात भामुखले सांसदका शब्द पनि अभिलेखबाट हटाउन भनिसकेको बताए । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न सोधेका प्रतिपक्षी सांसदलाई ‘निम्छरो’ भनेको भन्दै उक्त शब्द अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको थियो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माको प्रश्न, ‘ भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुभएको छ। २५ अर्बभन्दा माथिको ठेक्कापट्टा प्रधानमन्त्रीले मात्रै लगाउने नियम बनाइएको छ। अब भ्रष्टचार प्रधानमन्त्री आफैंले गर्ने हो कि अरुलाई गर्न दिने हो स्पष्ट पारिदिनुहोला । ‘ नै गैरसंसदीय भएको दाबी गरेका थिए ।
सांसद ज्ञानकुमारी छ’न्त्यालको नि’धन
संसदमा शुद्ध र सहजसंग बोल्न नसक्दा सांसद नै हाँसोको पात्र !